Hopitaly Potemkin Ao Rosia? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2013 3:25 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Italiano, Español, русский, English
Tokony hatoky izay hitany ao amin'ny fahitalavitra Rosiana ve ny vahoaka? Tsia, hoy i Daniil Tereschenko ao Môsko, ao amin'ny lahatsoratra iray ao amin'y LiveJournal [ru] navoakany tamin'ny 11 Novambra 2013. Tereschenko, mpikambana aminà fikambanana ara-pivavahana iray, miaraka aminà firehana nasionalista, dia miantso ny Firahalahiana Ortodôka ho amin'ny Fitroarana[ru], mitanisa tantara iray hafahafa mikasika ny fitsidihana nampitaina tamin'ny fahitalavitra [ru] nataon'ny Praiminisitra Dmitry Medvedev vao haingana tao amin'ny hôpitaly iray ao Môsko.
Araka ny nambaran'ny “mpiray kilasy fahiny” tamin'i Tereschenko saingy tsy nitonona anarana, miasa ao amin'ilay hôpitaly, nandritra ireo andro nialoha ny handalovan'ny PM, nasiam-panovàna malaky ilay toerana. Roa andro nialoha izay, niato tsy nandray marary vaovao intsony ilay hôpitaly. Nandritra io fotoana io ihany, nalefa nody daholo izay rehetra afaka nandeha ka tsy natahorana hitera-doza amin'ny ainy. Fa ny tena nanaitra dia ity :
Naverina norakofana takelaka plastika haingana ireo lalantsaran'ilay hopitaly noheverina fa mety handalovan'i Medvedev, ary ny gorodona norakofana “linoleum” vaovao. […] vantany vao niala ny hôpitaly i Medvedev, nesorina avy hatrany ireo takelaka plastika azo endahana sy ny linoleum teny amin'ireo lalantsara ary nentina niala teo.
Ilay lahatsoratra, izay tsy ahitàna porofo mazava (ankoatry ny hoe natao hihomehezana), dia nahangona fanehoankevitra manodidina ny 400. Maro no nino mora foana ny fahamarinan'ilay tantara, ary ny sasany dia nanana ny tantaran'ny “tanànan'i Potemkin” hotantaraina. salome_lou, mpampiasa LJ, nanoratra hoe [ru] :
Tahaka izany ihany fony izy nitsidika ny Sekoly [Oniversitem-panjakana ao Môsko] fianarana ho mpanao gazety. Saika tsy fantatro ilay efitrano fianaranay, fa dia navaozina hatramin'ny karipetra, fa taoriana kelin'izay dia nesorina niala teo daholo izany rehetra izany.
Bilaogera iray hafa no niteny fotoana iray [ru] fony i Medvedev nitsidika ny tanàna kelin'i Kozelsk, izay nandraisan'ireo manampahefan'io tanàna io fanapahan-kevitra handefa indray ny rano mifantsitsitra ho fanomezam-boninahitra azy. Ny tsininy fotsiny dia ririnina sady nangatsiaka ny andro. Bilaogera iray fahatelo no nahatsiahy [ru] fotoana iray fony nahazo WIFI ny orinasa iray tao Siberia, izay nesorina avy hatrany vantany vao vita ny fitsidihana.
Ny hafa nametra-panontaniana mikasika ilay lahatsoratr'i Tereschenko. Iray tamin'ny mpaneho hevitra no niteny [ru] fa ny famelàrana vonjimaika ny linoleum dia mety handrakotra olana samihafa marobe ka hotakon'io ampahany iray io tsy ho voaresaka ny ambiny. Mpamaky iray hafa no nahamarika [ru] ny tsy fahampian'ny sary mamatotra/miampanga tao anatiny (sady izao koa, efa samy manana finday misy fakàntsary avokoa izao ny tsirairay amin'izao androntsika izao), ka nampifandray izany taminà tahirin-tsary tao amin'ny aterineto avy amin'ny tranonkalan'ilay hôpitaly. Maneho toerana voazava tsara sy fitaovana arifomba ilay tahirin-tsary :
tahirin-tsary #67 an'ilay hôpitaly. dikasary.
Mazava loatra, izany tsy entina hitenenana hoe mety ho sary namboamboarina ireny, araka ny anipihan'i [ru] Andrey Bibikov azy.
Farany, nisintona ny sain'ny tao amin'ilay hôpitaly manokana ihany koa ilay lahatsoratr'i Tereschenko– izay nandefa valin-kafatra iray [ru] tao amin'ny tranonkalany. Nolavin'ilay hôpitaly ny filazana hoe nanova ny fomba fanaony izy na nampiato ny fikarakarana sy fandraisana marary. Nihomehezany ihany koa ilay tantaranà linoleum, raha nekeny kosa hoe nisy ny famelarana vonjimaika karipetra tao amin'ny efitrano nanaovana kaonferansa mba hanatsaràna ny lafiny feo.
Sarotra ny hiteny hoe iza no mandeha amin'ny mahitsy, raha tsy ohatra hoe mandeha mijery maso any amin'ny hôpitaly mihitsy ianao. Aleo izany ho any, matetika ny olona no mirona mino izay tiany hinoana — na io zavatra hitany tanaty TV na novakiany tety anaty aterineto.